Ahoana ny fomba hanesorana ny eritreritra ratsy?
Azo antoka fa tsikaritrareo fa ny zava-mitranga, izay eritreretinao matetika sy mahatsiaro, dia mitranga amin'ny farany. Raha ny marina dia tena misy ny eritreritra, noho izany dia mila mitandrina be amin'izy ireo ianao.
Ny atidohan'olombelona dia mifototra am-po - tsy misy ny eritreritra mahatsiaro mahatsiaro! Aiza no misy antsika, dia manjavozavo miharatsy kokoa ny tendako eo amin'ny lohako. Eny, ahoana raha miseho amin'ny loha ny eritreritra ratsy, ahoana no fomba hamahana azy ireo? Raha ny marina dia misy fomba maro azo alaina amin'ny fisainana ratsy, fa raha mitantana irery ianao na tsy maintsy hanandrana azy ireo dia miankina aminao.
Ahoana no iatrehana ny eritreritra ratsy?
1. Ny safidy manahirana indrindra dia ny miteny amin'ny tenanao hoe: "tsy hitranga amiko mihitsy izany" ary mijanà mieritreritra momba ny ratsy. Saingy tsy natao ho an'ny olon-drehetra izany fomba izany, satria tsy ny olon-drehetra no manana tanjaka ampy hanaisotra ny eritreritra ratsy amin'ny tsindry iray.
2. Raha mibontsina tsara ny eritreritra ratsy ao an-dohanao, dia azonao atao ny manandrana mitondra azy ireo amin'ny fampiasana ity fomba manaraka ity:
Mipetraha eo amin'ny toerany tsara, fa tsy miampita ny sandrinao sy ny tongotrao. Atero ny masonao, maka aina ary manaova fofona sy fofona lalina;
asehoy izay tsy ipetrahanao toy ny vongam-pahavaratra eo amin'ny tratranao;
manaova fientanam-po lalina, eritrereto ny fomba hialan'ity kiran-doza ity aminao miaraka amin'ny rivotra. Atsaharo ny eritreritrao ratsy, manodidina azy ireo amin'ny hazavana fotsy ary mihazona azy ireo ao anatin'io kôkôla io mandrapahatonga azy ireo tanteraka.
3. Ny fomba fampahafantarana amin'ny ankapobeny dia tena mahomby, indrindra raha mila miala amin'ny eritreritra ratsy ianao. Manoro hevitra azy ireo ny psikology, ny bioenergetics ary ny psychic. Ny psikology ihany no manoro hevitra fa ny fampisehoana dia mampihomehy ihany koa, satria ny laughter no fitsaboana tsara indrindra ho an'ny karazana tahotra rehetra. Ohatra, eritrereto ny endriny amin'ny endriky ny baolina midobodoboka be dia be, ary ny eritreritra ratsy dia manidina eo akaikinao amin'ny teboka mainty kely. Ny fialam-boly bebe kokoa dia hijery, tsara kokoa. Ny fihomehezana amin'ny tahotrao dia hanafaka azy ireo ianao.
4. Azonao atao ihany koa ny manandrana manoratra na manoratra amin'ny taratasy, zavatra izay tsy manome fiadanana anao. Rehefa ahemotra ny masonao, milalao ny toe-javatra rehetra, sokafy ny masonao ary asio indray, toy ny mametraka ny olana rehetra eo amin'ny taratasy iray. Alao sary an-tsaina fa ny fahalalanao dia tsy misy amin'ireo eritreritra ireo, fa izy rehetra dia nafindra tamin'ny taratasy. Ary ankehitriny, ny ravina dia tokony hodorana na rovitra, ka milaza hoe - Holevoniko ny zava-dratsy rehetra, hamiravira sy handoro azy ireo.
Ahoana ny fomba fialana amin'ny fisainana ratsy? Eny, raha te hiala avy amin'izy ireo ianao rehefa tsy misy fotoana hieritreretana, dia tsy hifikitra amin'ny lohanao intsony ny eritreritra ratsy. Koa inona àry no tokony handaminana ny tenantsika?
Manaova zavatra mahaliana, mitaky lanja sy fifantohana. Voamarikao ve fa rehefa miditra tanteraka amin'ny raharaham-barotra ianao, tsy mihevitra ve ianao hoe miditra ny lohanao? Ho tonga eto, ny tena zava-dehibe dia ny mahita lesona mahavariana.
Mitandrema amin'ny ratsy! Tsara foana ny handresy ny ratsy, hany ka ho tanteraka amintsika izany. Mila mahatsiaro ianao fa mazàna no mientanentana, mitondra fihetseham-po tsara - bokim-pirahalahiana, horonan-tsary, satrika satirical. Tadidinao Ve? Eny ary, mandroso, miampita amin'ny fisainana tsara, ny eritreritra ratsy amin'ny tarehimarika toy izany dia azo antoka fa hatahotra sy hamela ny lohanao.
Mianara mieritreritra tsara. Miezaha mieritreritra tsara. Ohatra, "nanomboka nirotsaka ny orana, saingy tsy naka elo aho, ho menatra aho ary hangatsiaka ny hatsiaka." Hanova izany amin'ny "nanomboka ny orana, tsy manana elo aho, fa amin'ny faran'ny andro dia hifarana ny orana, tsara ny mandeha an-trano amin'ny alina, mifoka rivotra madio rivotra." Miezaha mampita ireo eritreritra ratsy rehetra amin'izany fomba izany, matetika dia milaza amin'ny tenanao fa "zavatra tsara ihany no hitranga amiko" sy "ny zava-drehetra izay manjo ahy, mba hahatsara kokoa."
Loko maitso amin'ny psychologie
Tahotra ny mikraoba
Ny teorian'i Freud
7 famantarana ny vehivavy salama saina
Ny vokatry ny loko eo amin'ny psyche olombelona
Ny olan'ny toetra ao amin'ny psychologie sosialy
Inona no nofinofin'ny hazo?
Ayurveda ho an'ny vehivavy
Ny talcana dia tsara sy ratsy
Polidex ny orana
Mpampiasa format format lehibe
Toeram-pandrefesana fananganana fantson-kofehy fanaka
Nahoana no nofinofy amin'ny brasele volamena?
Sakafo sipin-tsakafo - recipe
Lolo vavy amin'ny fikoropahana teknika
Fandoroana voan-java-manify amin'ny tanany manokana
Manondra siramamy avy amin'ny kohaka - tsara sy ratsy
Ahoana no fomba hanamboarana volo fohy?
Ny Raincoats Women - Fall 2016
Nahoana isika no manana kofehy?
Famantarana sy finoanoam-poana ho an'ny vehivavy bevohoka